Gbalịsie ike amị nhọrọ ọrụ
Rolling biarin abịa na a dịgasị iche iche nke ụdị, shapes na akụkụ. Chepụta a Rolling amị ndokwa ka ọ dị mkpa iji họrọ a kwesịrị ekwesị na-amị ụdị na-ekpebi a kwesịrị ekwesị na-amị size. Otú ọ dị, a na-amị ndokwa bụghị naanị iso nke Rolling biarin ma na-agụnye mmiri metụtara na biarin dị ka aro na ụlọ. The mmanu bụkwa a dị nnọọ mkpa akụrụngwa nke na-amị ndokwa n'ihi na o nwere iji gbochie wear ma na-echebe megide corrosion nke na-amị nwere ike idokwa ya zuru arụmọrụ. N'akụkụ ndị a, akara nwekwara a dị nnọọ mkpa akụrụngwa, arụmọrụ nke bụ nke oké mkpa ka ịdị ọcha nke mmanu. Ọzọkwa, ọtụtụ akụkụ ndị ọzọ nwere ga-atụle, dị ka kwesịrị ekwesị ọkụ na ịgba esịtidem nwechapụ ma ọ bụ preload, na-ejide na ngwaọrụ na echichi na mwepụ ụzọ, wdg
ngwa ihe ngwọta
Iji ọma ike uru maka ndị ahịa na-achọ a miri emi na nghọta nke ihe ndị ahịa kpọmkwem achọ na mkpa banyere ngwaahịa na ọrụ. Ahịa ndị Nlụpụta nnukwu usoro nke ngwaahịa ndị dị otú ahụ dị ka ugbo ala, ezinụlọ ngwa, nfuli na ọkụ Motors nwere kpọmkwem na aka chọrọ banyere technology, àgwà, lọjistik na price. anyị na-enye gị ọkọlọtọ na ahaziri ngwọta na-enyere gị ka mma ịrụ ọrụ na, n'otu oge, belata n'ozuzu-akwụ ụgwọ.
Omenala Products Design
Ikike anyị nwere na-arụ ọrụ anya na ahịa - irè aghọ a imewe ibe - bụ ntọala nke Viproce unen. Anyị injinia na-aghọta na onye ọ bụla ngwa bụ ihe pụrụ iche. Anyị nwere ogologo akụkọ ihe mere eme nke na-enye otutu na-eri-oru oma agbanwe agbanwe, nke na-enye gị aghụghọ a asọmpi na onu.
Viporce mgbe nile aghụghọ pụrụ iche biarin anya akporo nke ọkọlọtọ anyị ngwaahịa akara. Ma nta ma ọ bụ ibu, na pụrụ iche àgwà, ma ọ bụ nke pụrụ iche ihe, anyị na-enwe ahụmahụ na-chepụta kacha ngwọta.
Ụfọdụ nke oké ngwọta anyị mere maka gụnyere 1mm ka 8 "aro diameters, enwe 25,000 lbs. [11.340 kg], okpomọkụ si -320 ° F 600 ° F [-195 Celsius na 315 ° C], chemical ikpughe na UV iguzogide. More ọtụtụ, anyị injinia chepụta kacha arụmọrụ, ihe onwunwe itinye n'ọrụ ma ọ bụ ịnabata a pụrụ iche chọrọ choro site na ngwa ma ọ bụ nzukọ usoro.
Wedata Your Import na Export Cost
Certificate si registratio n
General Certificate si, ndebanye aha na issuance (C / O), GSP, akwụkwọ nke si malite, ndebanye aha na issuance (FORMA, FORME)
Translation, mail reply, azụmahịa mkpakorita
Ntinye akwụkwọ, towing kabinet, na-eme omenala nkwupụta akwụkwọ, omenala nkwupụta na omenala nwechapụ akwụkwọ
Online ndekọ, akwụkwọ, nkwenye
Document nyochaa, ọmụma ntinye, tax nkwụghachi nkwupụta